३ माघ २०७७ | January 16, 2021
एउटा विचित्रको विवाहः ‘वेडिङ नाइटमा सेक्स थिएन, अरु धेरै कुरा थिए’
१८ भाद्र २०७४
एउटी यस्ती युवतीको कथा जो श्रीमती पनि आफै हुन् र श्रीमती पनि । यो आफैमा एउटा विचित्र हो, तर उनले यसो गरिन् । उनी युवतीको शब्दमा पढ्नुस् यो विचित्र विवाहको अनुभवः दुई वर्षअघि मैले आफैसँग विवाह गरेकी थिएँ । त्यो विवाहको दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्तम दिन थियो । म विन्टेज गाउनमा थिएँ र आँखाभरि आँसुसहित मेरा पिता मलाई विदा गरिरहेका थिए । मेरा साथीहरु…विस्तृत समाचार »
विचित्रको सजाय, बाछा मारेको आरोपमा भिख माग्नुपर्ने फैसला
भारतको मध्यप्रदेशको भिन्ड सहरमा बाछा मारेको आरोपमा एक जना महिलालाई पञ्चायतले विचित्रको सजाय सुनाएको छ। पञ्चायतले ५५ वर्षीया कमलेशीलाई गोवंश हत्या आरोपमा एक हप्ताका लागि गाउँ निकाला गरेको छ। बाछा मारेको आरोपमा कमलेशीलाई गाउँ बाहिर रहेर सात दिनसम्म भिख माग्नुपर्ने र भिख मागेको पैसाबाट गंगा स्नान गरेर आफूलाई ‘शुद्ध’ गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो । गंगा स्नान गरेपछि भने कमलेशीलाई गाउँ फर्कन दिइने भएको छ। जब…विस्तृत समाचार »
​महिलाको स्तनको काम के के होला ? एउटा पुस्तक यसरी फस्यो विवादमा
१७ भाद्र २०७४
युवाहरुका लागि प्रकाशन गरिएको प्युबर्टी गाइडका अनुसार महिलाको ‘स्तन’ को अस्तित्वको मात्र दुई वटा कारण छ । पहिलो–बच्चाका लागि दुध उत्पादन गर्नु र दोस्रो–युवतीहरुलाई जवान र आकर्षक देखाउनु । यो प्युबर्टी गाइडको नाम ग्रोइंग अप फर ब्वाइज हो, जसमा अगाडि लेखिएको छ–वास्तवमा अधिकांश स्तन, यो दुई काम गर्न सक्दछ। ग्रोइंग अप फर ब्वाइज नामको यो प्युबर्टी गाइडका लेखक एलेक्स फ्रिथ हुन् । यो गाइडको प्रकाशन…विस्तृत समाचार »
आमाबाबुले सन्तानमाथि गरेका आश्चर्यलाग्दा अत्याचारहरु (तस्वीर कथा)
भनिन्छ कि कुनै पनि आमाबाबुको सबैभन्दा बढी माया आफ्नो सन्तानमाथि हुने गर्दछ । आफ्नो सन्तानको खुसीका लागि उनीहरु जे पनि गर्न तयार रहन्छन् । तर, केही यस्ता आमाबाबु पनि यो संसारमा जिवितै छन्, जो आफ्नो मनोरञ्जनका लागि आफ्नै सन्तानमाथि अत्याचार गर्न पछि पर्दैनन् । यहाँ त्यस्तै केही आमाबाबुको तस्वीर प्रस्तुत गरिएको छ, जहाँ बालबालिका आफ्नै आबाबाबुको अत्याचारको शिकार बनेका छन् । केही पहिला एक जना…विस्तृत समाचार »
आमा बन्न चाहने महिलाका लागि गज्जबको उपाय
यदि तपाई महिला हुनुहुन्छ र आमा बन्ने अर्थात गर्भवती बन्न चाहनु हुन्छ भने तपाईका लागि एउटा तथ्य खुलासा भएको छ। हालै भएको एक अध्ययनका अनुसार गर्भवती बन्न चाहने महिलाले राति सुत्ने बेला बत्ती निभएर सुते आमा बन्ने सम्भावना बढी रहन्छ । सैन एंटिनियोस्थित टेक्सास स्वास्थ्य विज्ञान केन्द्रको सेलुलर बायोलजीका प्रोफेसर रसेल जे रायटरले आफ्नो अध्ययनका आधारमा सुत्ने बेला कोठा अँध्यारो भएको खण्डमा प्रजनन स्वास्थ्य र…विस्तृत समाचार »
तपाईसँग यसको उत्तर छ? उत्तर दिन कठिन विचित्रका प्रश्न
१४ भाद्र २०७४
विगत दश वर्षका क्रममा कुन प्रश्न होला जुन मानिसहरुले बढी सोधेका थिए तर जवाफ अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन । भभभ वेभसाइटले यस्तै दश प्रश्नको सूची सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न व्यक्तिले सोध्ने प्रश्नको उत्तर दिने गर्दछ। वेभसाइटका अनुसार त्यहाँ हरेक महिना १ करोड ६० लाख प्रश्नको जवाफ दिइने गरिन्छ। तर फेरि पनि केही प्रश्न यस्ता रहन्छन् जसको उत्तर खोजेर पनि पाइँदैन । भभभ की नादिया…विस्तृत समाचार »
सर्पले पनि गर्दो रहेछ आत्महत्या, भिडियोमा हेर्नुस् सर्पको डरलाग्दो आत्महत्या
१३ भाद्र २०७४
एजेन्सी । चरम तनाव र निराशा पैदा भइ बाँच्न नसक्ने निष्कर्षका साथ मानिसले आत्महत्या गर्छ । नेपालमा पनि आत्महत्याको समस्या विकराल छ । मानिसले आत्महत्या गरेको त हामी सबैले देखे–सुनेकै कुरा हो । तर मानिसले मात्र नभइ सर्पले समेत आत्महत्या गर्दो रहेछ भन्ने रहस्य फेला परेको छ । अष्ट्रेलियामा ट्रि ब्राउन जातको सर्पले आत्महत्या गरेको खबर अहिले विश्वभर भाइरल बनेको छ । सर्पले समेत आत्महत्या गरेको यो…विस्तृत समाचार »
उडिरहेको बिमानमा यौन सम्पर्क, हेर्ने यात्रु लाजले भुतुक्क
११ भाद्र २०७४
बेलायतमा उडिरहेको एउटा विमानमा एक जोडीले यौन सम्पर्क गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । म्यानचेस्टरबाट इबिजातर्फ उडिरहेको एउटा विमानमा सो घटना भएको हो ।यौन सम्पर्कअघि सो जोडी मदिरा सेवन गरेको बताइएको छ । ती युवा युवती पति–पत्नी वा प्रेमी प्रेमिका को हुन् भन्ने बारेमा केही खुलेको छैन । छेउमा रहेका यात्रुलाई अर्काेतिर फर्कन भन्दै उनीहरू यौन सम्पर्कमा लिन भएको विमानमा रहेका अन्य यात्रुले जानकारी दिएका…विस्तृत समाचार »
​एकैपटक अर्बौको चिठ्ठापरेपछि, जागिर छाडेर यस्तो योजना
१० भाद्र २०७४
एकैपटक अर्बौ रुपैयाँ बराबरको चिठ्ठा परे तपाई के गर्नु हुन्छ होला ? मस्तीसँग घुम्ने खाने ? जागिर भए त्यो पनि छोड्नु हुन्छ होला । अमेरिकामा पनि एक महिलाले त्यसै गरेकी छन् । झण्डै ८० अबै बराबरको चिठ्ठा परेपछि उनले जागिर छाडेकी छन् । उत्तर अमेरिकाको इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो धनराशीको चिठ्ठा जित्ने महिलाले ७५८.ठ मिलियन डलर झन्डै नेपाली ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिठ्ठा जितेपछि उनले गर्दै…विस्तृत समाचार »
१३९ किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिमा रहेको गाडीमा जोडी चुम्बनमा लिप्त भएपछि...
९ भाद्र २०७४
गाडी चलाइरहेको अवस्थामा लिइएको एउटा चुम्बन जोडीका लागि महंगो सावित हुने भएको छ ।यो चुम्बनलाई जर्मनीकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा तिब्र चुम्बन मानिएको छ। प्रहरीले यो जोडीको चुम्बन लिँदै गरेको तस्वीर प्रमाणका रुपमा पेस गरेको छ। ट्राफिक क्यामेराले लिइको यो तस्वीर प्रेमको इतिहासमा मात्र होइन प्रहरी इतिहासमा समेत समावेश हुने भएको छ। जर्मन नेशनल हाइवे ४५ दौडिरहेको गाडीमा चुम्बन लिँदै गरेको जोडीको तस्वीर प्रहरीको क्यामेरामा कैद भएको…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 17 18 19 20 21 Older Last ›